Fifidianana : Hiady amin’ny herisetra ny KMF/KNOE -
AccueilSongandinaFifidianana : Hiady amin’ny herisetra ny KMF/KNOE
Fifidianana : Hiady amin’ny herisetra ny KMF/KNOE
Nanatanteraka atrikasa amin’ny fametrahana rindran-damina hoenti-misoroka ny herisetra mandritra ny fifidianana ny teo anivon’ny KMF/KNOE, omaly teny Faravohitra.
Tamin’izany indrindra no nitondran’izy ireo fanazavana mahakasika ny mety hisian’ny herisetra mandritra ny fampielezan-kevitra, mandritra sy aorian’ny fifidianana. Nampahafantarin’izy ireo tamin’ireo mpandray anjara tamin’ny dinidinika fa mba hisian’ny fifidianana mirindra sy milamina ary eken’ny rehetra, dia tokony hisy ny rindran-damina hapetraka. Voalaza mantsy fa efa misy sahady ny manao fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana, ka ao anatin’izay no mety hisian’ny fifampihantsiana amin’ny alalan’ny teny aloaky ny vava sy ny fihetsika tsy voahevitra, amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera, amin’ny alalan’ny afisy isan-karazany, sns, ka mety hiteraka izany herisetra izany.
Noho izany indrindra, hoy ny teo anivon’ny KMF/KNOE, dia mila miasa dieny izao ahafahana mifehy izany rehetra izany mba tsy hisiana sy hisorohana ny trangan-javatra mety hiseho mandritra ny fifidianana.
“Raha te hampisy fifidianana mirindra sy milamina isika, dia tsy maintsy hapetraka aloha ny rindran-damina rehetra ahafahana misoroka ny herisetra. Milaza aminareo aho fa ao anatin’ny fampielezan-kevitra no tena ahitana ny herisetra satria mety ho heno ao ny teny tsy voahevitra, ny fifampihantsiana amin’ny lafiny maro samihafa, ny serasera mihoatra amin’ny tokony ho izy, sns. Koa raha amin’ny alalan’ny herisetra no ahazoan’ny kandida iray fahefana, rariny loatra raha hiteraka korontana izany. Noho izany indrindra, dia tsy maintsy mijery ny paikady rehetra isika dieny izao ahafahana misoroka izany”, hoy ny filohan’ny KMF/KNOE, Andoniaina Andriamalazaray.
Ankoatra izay, voalaza fa hanatanteraka fihaonana amin’ireo mpisehatra ara-politika sy ireo kandidà izy ireo atsy ho atsy mba hisian’ny fifampiresahana ka hametrahana ny fifanajana ao anatin’ny fifidianana. “Ao anatin’ny fifampiresahana dia efa afaka mamaha olana maro isika. Izay ilay ady amin’ny herisetra tiana hapetraka. Ao anatin’ny asan’ny KMF/KNOE ihany koa anie izany e!”, hoy hatrany i Andoniaina Andriamalazaray.
Araka izany, mbola tsy voafaritra mazava kosa ny daty sy ny toerana hanatanterahan’izy ireo ilay sehatra fampihaonana amin’ireo mpisehatra ara-politika.